musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sri Lanka Kuputsa Nhau » Wildlife Tourism: Iko Kudiwa Kwenyaya Dzakanaka
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vatori vechikamu vari kuita zvekushambadzira kushanya kweSri Lanka vanofanirwa kunge vachigadzira nyaya dzine mavara dzezviitiko zvemhuka dzesango muSri Lanka, pane kuburitsa chokwadi nenhamba. Chinodiwa kugadzira uye kutaura nyaya dzemhuka dzesango nekubata kwemunhu.
Kana munhu angangoshanya achifonera hotera kana sangano rinoona nezvekufamba kuti abvunze nezvezvinokwezva mhuka dzesango muSri Lanka, kazhinji vashandi vekutengesa vanongopa mafambiro uye vanotaura nezvemhuka dzinogona kucherechedzwa, pane kuratidza mhuka dzesango nenzira inokwezva.
Izvi zvingada kuti vashandi vezvekushanya vakazvimirira vega vave neruzivo rwakanyanya rwemhuka dzesango uye kufarira, uye meseji inofanirwa kudzika kune vashandi vanotaurirana nevashanyi. Zvichakadaro, mahotera mazhinji zvino ane nyanzvi dzemuzvarirwo pamihoro yavo, uye mahotera akadaro anofanira kuvakurudzira kuita nyaya dzevashanyi kuti vanakidzwe nemhuka dzesango munzvimbo iyi.
Kwemakore apfuura, ndanga ndichipa nyaya dzakawanda dzemhuka dzesango dzinoshamisa. Pakati pevamwe vazhinji, ndakanyora zvakanyanya pa:
• Rambo nzou yemusango inofamba nepakati peUda Walawe National Park.
• Anonoka uye mukuru Walawe Raja, mambo asina kupokana weUda Walawe kwemakumi emakore.
• Gemunu, nzou yemusango ine misikanzwa yeYala National Park, inopamba mota dzevaenzi ichitsvaga chikafu.
• Hamu naIvan, ingwe dzakura, dzakangwara, dzechirume (akazofa zvino) zvakare vekuYala National Park.
• Natta, ingwe yechirume inofananidzira, uye mhembwe Cleo, ingwe hadzi yakura, yeWilpattu National Park.
• Timothy naTabitha, 2 semi-tame giant squirrels paSeenuggala Bungalow mukati meUda Walawe Park.
Ndakatora antics avo uye ndakavaka mavara akavakomberedza. Uye handikumbire ruregerero ne “kuvaita vanhu”. Ndizvo zvinoita kuti zvese zvinyanye kunakidza kuvanhu. Ini nguva pfupi yadarika ndakatora nyaya yegarwe rekugara, Villy paJet Wing Vil Uyana Hotel, uye ndakaruka nyaya yese yakaitenderedza.
Africa inogona kuva yavo "Vakuru Vashanu" mhuka, asi isu tine zvedu "Big Four" mhuka dzinoyamwisa - blue whale, nzou, ingwe, uye sloth bear. Vamwe vevandinoshanda navo vanotaura nezve "Big Five" yedu, vachiwedzera sperm whale kune iyi rondedzero, asi ini handibvumirane nekuve nemhando mbiri dzemhando dzakafanana pane rondedzero.
Sri Lanka ine inenge 30% yeimwe rudzi rwechifukidziro chakasvibirira, zvinopfuura 3,000 zvinomera, uye anopfuura chiuru emarudzi emhuka. Saka isu zvirokwazvo hatina kuperevedza kwezvakanaka kushanya kwemhuka dzesango promotional material. Saka ndinoshamisika kana Sri Lanka ichinyatsoda nhamba dzakakwirira dzevashanyi, kana kuti tinofanira kutevera imwe nzira yemhando pamusoro pehuwandu?
Sri Lanka yakagamuchira vashanyi 2.3 miriyoni muna 2018 vakawana imwe US$4.4 bhiriyoni mumari. 2018 ndiyo yakanakisa base-kesi mamiriro, nekuti muna 2019 takava nekurwiswa kwehugandanga, uye takazove neCOVID Pandemic. Kushanya kwemhuka dzesango chikamu chiri kuramba chichikura uye Wikipedia inotaura kuti kushanya kwemhuka dzesango parizvino kuri kushandisa vanhu mamirioni makumi maviri nemaviri pasi rese zvakananga kana zvisina kunanga uye inopa mari inodarika mabhiriyoni zana nemakumi maviri emadhora kuGDP yepasi rose.
Kunyange muSri Lanka, takaona kuwedzera kunoshamisa muchikamu ichi. Muna 2018 inenge 50% yevashanyi vose munyika yakashanyira imwe yemapaki emhuka dzesango, kubva pa38% muna 2015. Dhipatimendi reKuchengetedza Kwemhuka dzesango rakawana mari inoshamisa yeRs 2.1 bhiriyoni mu2018 kubva kune dzimwe nyika kutengesa matikiti.
Izvo zvinofanirwa kusimbiswa, zvisinei, kuti indasitiri yekushanya inofanirwa kuita semuchengetedzi wemhuka dzesango dzinokwezva muSri Lanka pane kukonzeresa kudzikisira kwavo, pamusoro peiyo iyo yega yega inofanirwa kuve yakangwarira uye ine mutoro pamusoro payo.